MP4 waa Apple ah oo ay taageerayaan qaab video, si kastaba ha ahaatee, mararka qaar waxaad uusan ciyaari karo files MP4 in QuickTime / Lugood / Apple TV, ama MP4 aan la garan karaa in aad iPhone, iPad, iPod iwm Sababtu waxa weeye in aad intaas kudarayaan code MP4 't oo ay taageerayaan qalabka ama codsiyada aad. Maqaalkani waxa uu si toos ah u talin doonaan MP4 xirfad leh oo si sahlan loo isticmaalo in Converter M4V inuu kaa caawiyo inaad la Dhibaatada dareemayaasha-gaarin video codec ka qaban. Iyada oo taageero ka ay interface toos ah, waxaad si deg deg ah u oofin karin MP4 in ay diinta ka M4V.
Qeybta 1: Best MP4 M4V in Video Converter
Qeybta 2: MP4 Free in M4V Converter
Qeybta 3: MP4 Online in M4V Converter
Qeybta 4: Aqoonta Extended u MP4 iyo M4V
Qeybta 1: Best MP4 M4V in Video Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
Beddelaan MP4 in M4V, MOV, MKV, AVI, ama wax kasta oo kale oo ah qaabab video oo caan ah.
Presets filaayo in iDVD, Pro Goo Final, iMovie, iyo telefoonada Apple.
Samee DVD xirfadle by MP4 gubanaya si DVD badan oo arrimo menu dhisay-in.
Ku dar metadata (cover filim, sharaxaad, comment, agaasimayaasha) in kasta oo videos.
Sida loo Beddelaan MP4 M4V in la Wondershare Video Converter
Just heli tutorial hoose ee ku saabsan sida loo badalo MP4 M4V inay u Windows (Windows 10 ka mid ah). Sidoo kale riix halkan ku gartaan si loo badalo MP4 M4V inay ku Mac (Yosemite ka mid ah).
Tallaabada 1 dar videos MP4 in MP4 in ay Converter M4V
Waxaa jira saddex siyaabood oo gebi ahaanba optional in ay dajiyaan files MP4 aad.
Mid ka mid ah ayaa marka hore waa in la garaaco "Add Files" ikhtiyaarka in this app ee Murayaad bidix si aad ku shuban files MP4 deegaanka.
Midda labaadna waa in ay tagaan "Beddelaan" tab> "Add Files" menu.
Oo mid saddexaad waa in la jiidayo files bartilmaameedka ka kombiyuutarka barnaamijkan.
Tallaabada 2 Dooro M4V sida qaab wax soo saarka
Si aad u dooratid M4V, riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad in la furo liiska profile hoos-hoos, ka dibna tag "Qaabka" ayuu> "Video"> "M4V".
Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad dhigay video codec. Hit ah "Settings" doorasho, markaas in doorasho Video Encoder, H.264 dooran. Dabcan, waxa kale oo aad sameyn kartaa koobin kale, as1280 sida ay 720 pixels iyo 30 loox kasta labaad iwm Riix "Ok".
Fiiro gaar ah: app Tani waxay sidoo kale ku siinaysaa qaab filaayo in qalabka kasta Apple. Dabcan, waxa kale oo aad dooran kartaa mid ka mid ah "Device"> "Apple" category.
Tallaabada 3 badalo MP4 M4V in
Beddelaan MP4 M4V in adigoo riixaya ah "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa app this ah. Waxaa la samayn. Ka dib markii diinta, ka heli faylasha la gediyay galka wax soo saarka. Just wareejiyo Lugood, iPhone, iPad, iPod iyo iwm ah loo isticmaali karo.
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan MP4 M4V inay u Windows (Windows 10 ka mid ah)
Qeybta 2: Free MP4 M4V in Converter
Free Video Converter: Wondershare MP4 Free in M4V Converter
Waxaad isticmaali kartaa MP4 bilaash ah si ay u Converter M4V si loogu badalo MP4 M4V in aan watermark. Tutorial waa la mid Video Converter Ultimate.
Pro: 100% MP4 FREE in Converter M4V
1. Barbar Video Converter Ultimate, kaliya waxa aad isticmaali karto si loogu badalo caadi video, laakiin 3D iyo HD videos ma taageersana.
2. MP4 ayaa si xor ah u Converter M4V aan haysan presets u iDevices. Waxaad u baahan tahay si ay u dejiyaan-beegyada uu u gacanta.
3. In la eego video tayada la gediyay, waxa aanu sida ugu fiican ee Video Converter Ultimate.
Ayaa qaab M4V waa qaab video file caadi ah ee ay soo Apple oo inta badan loo isticmaalaa in lagu kaydiyo Lugood. Wuxuu aad ugu dhow in ay qaab MP4 ah. Kala duwan ugu weyn ee ka dhexeeya labada waa ilaalinta DRM copyright Apple doorashada ee. Ku dhowaad dhammaan M4V files gatay dukaanka Lugood leeyihiin ilaalinta DRM copyright. Files Kuwaas oo kaliya lagu ciyaari karo qalabka qoray, halka MP4 waxaa la ciyaari karaan qalab kasta.
Haddii aad daryeel badan oo ku saabsan wax soo saarka video tayada, xawaaraha diinta iyo presets filaayo, uun ka heli Video Converter Ultimate hoos ku qoran.
Sida loo Beddelaan M4V in FLV
Sida loo Beddelaan M4V in DVD ee Mac / Win
Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in MP4
Sida loo Beddelaan wmv in MOV (Quicktime) aan Loss Quality
Sida loo Beddelaan WLMP in MP4 la Loss Tayada Zero
AVCHD vs MP4, Faraqa u dhexeeya AVCHD iyo MP4
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 M4V in la Loss Tayada Zero